भिडियो - Nepali Patrika | नेपाली पत्रिका
ईः ले तोडे आमरण अनसन, मन्त्रालयले सकारात्मक पहल गरेको निष्कर्ष
२०७७ श्रावण २५ गते, आईतवार, १०:१२ बजे प्रकाशित
On: २०७७ श्रावण २५ गते, आईतवार, १०:१२ बजे प्रकाशित
काठमाडौँ। ‘इनफ इज इनफ’ अभियानका अभियन्ता ईः ले आमरण अनसन तोडेका छन्। उनले आइतबार २३ औं दिनमा अनसन तोडेका हुन्। सरकारले कोरोना परीक्षणको दायरा बढाएको र कोरोना नियन्त्रणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सकारात्मक पहल गरेको निष्कर्षमा उनी पुगेका हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ताविस्तृतमा
लक डाउनअघिको काठमाडौं र पछिको भिडियोमा
२०७७ बैशाख १५ गते, सोमबार, ०३:०७ बजे प्रकाशित
On: २०७७ बैशाख १५ गते, सोमबार, ०३:०७ बजे प्रकाशित
राजु भण्डारी। सधैंजस्तो व्यस्त रहने काठमाडौं शहर यतिखेर सुनसान छ। मानिसहरुको दिनचर्या घरभित्र रहेको कारण उपत्यकाका कतिपय व्यस्त र चर्चित गन्तव्यहरु मानवविहिन छन्। लकडाउनअघि र पछिका काठमाडौंका यही केही स्थानहरुलाई हामीले पहिला कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ भनेर देखाउनविस्तृतमा
लकडाउन: प्रकृतिलाई न्याय!
२०७६ चैत्र २२ गते, शनिबार, ०९:२५ बजे प्रकाशित
On: २०७६ चैत्र २२ गते, शनिबार, ०९:२५ बजे प्रकाशित
काठमाडौं । प्रकृतिमाथि भइरहेको निरन्तरको दोहनले यसको सुन्दरता गुमिरहेकोमा कुनै दुई मत भने छैन। बढ्दो जनसंख्या र मानवीय आवश्कताले नचाहेरै भएपनि प्रकृति माथि कब्जा हुनु पनि स्वभाविकै देखिन्छ। तर पछिल्लो समय कारोना भाइरसको प्रकोप संसारभरि नै देखिएपछि अधिंकांश देशमा घरबाटविस्तृतमा
सीमामा ‘भोक र तिर्खा’ सहेर बसेका नेपालीहरूको बेदना कसले सुन्ने?
२०७६ चैत्र १७ गते, सोमबार, ०४:०५ बजे प्रकाशित
On: २०७६ चैत्र १७ गते, सोमबार, ०४:०५ बजे प्रकाशित
गणेश ओझा, काठमाडौँ। कोरोनाका कारण आफ्नै देश फिर्न समेत ठूलो कष्ट व्यहोर्ने सयौँ युवा महाकाली नदि किनारामा यताउता गरिरहेका छन् यतिखेर। कोरोना सङ्क्रमणको कारण भारतले २१ दिने लकडाउन गरेपछि धेरै नेपाली युवाहरू घर फिर्न खोजे। भारतका कतिपय शहरहरू जसोतसो छिचोलेरविस्तृतमा
कोभिड–१९ विरुद्ध सार्क राष्ट्र प्रमुखहरुको भिडियो कन्फरेन्सको प्रत्यक्ष प्रसारण
२०७६ चैत्र २ गते, आईतवार, ०६:१० बजे प्रकाशित
On: २०७६ चैत्र २ गते, आईतवार, ०६:१० बजे प्रकाशित
काठमाडौ। कोभिड–१ को सङ्क्रमण फैलिन नदिन दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) सदस्य मुलुकका राष्ट्राध्याक्ष÷प्रधानमन्त्रीबीच आज साँझ भिडियो कन्फरेन्स शुरु भएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलिन नदिन सार्क राष्ट्रका नेतृत्वले सुदृढ रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने औँल्याई गतविस्तृतमा